Aasaaska Kwasans - Waxbarashada, Caafimaadka, Kobaca Haiti
Xarunta Caafimaadka LF
La wadaag Sheekadaada Haiti?
KORITAANKA KHUDBADDA. HORUMARKA QARANKA.
Hindisaha SEI - Beeraha Bixinta Nolosha
Haiti waxaa soo maray caqabado. Haa, hoos u dhigid ballaadhan. Haiti waxay leedahay karti. Sidoo kale hoos u dhigis ballaaran!
Kwasans - ereyga Creole oo macnihiisu yahay kobcin - waxaan u heellan nahay inaan gacan ka geysano furitaanka awoodda iyo tamarta dadka Haiti. Dalkan jasiirad qurxoon uma baahna dad caqli badan, dadaal badan oo ku dadaalaya inay nolol wanaagsan u abuuraan naftooda, qoysaskooda iyo bulshadooda. Waxa ka dhiman waa raasamaal. Kaabayaasha dhaqaalaha. Waxbarasho. Daryeelka caafimaadka. Fursad. Waxyaabaha u suurta geliya barwaaqada inay helaan kala-goyn.
Taageeradaada, dadaalladayada saameynta sare leh ayaa sii wadi doona kobcinta carrada. Abuurka abuurka. Awood siinta dadka Haiti ee caawiya Haiti.
Kwasans ma sii wadi karto shaqadeeda si ay gacan uga geysato xoojinta Haitianka caawinta Haiti iyada oo aan laga helin taageerada deeqsinimada leh ee dadka daryeelka sidaada oo kale. Fadlan gacan ka geyso dib u soo nooleynta dalkan quruxda badan iyo kheyraadkiisa iyo dadkiisa cajiibka ah adoo ugu deeqaya sababta maanta.
Waxaan ku faraxsanahay xiriirka dheer ee Kwasans ee Jaamacadda Notre Dame Haiti. Taageerida hay'adaha Haitia ee hada jira ayaa udub dhexaad u ah himiladeenna. Waxaan dareemeynaa in dadka reer Haiti ay awoodaan inay caawiyaan dalkooda iyo haweenkooda.
Waxqabadyada ugu waaweyn ee Kwasans Foundation hadda waxaa ka mid ah:
LYMPHATIC FILARIASIS (LF) Kiliinikada
Rugtan caafimaad ee ku dhow Port-au-Prince - oo ah tan kaliya ee la mid ah Haiti - waxay u baahan tahay taageero maaliyadeed si ay u sii wadaan shaqadooda muhiimka ah.
Dhagsii si aad waxbadan uga ogaato rugta caafimaadka!
Durbaba waa la dhisayaa, xaruntani waxay kobcin doontaa ganacsiga iyada oo ah xoog weyn oo loogu talagalay isbeddelka iyo kobaca Haiti.
Wax ka baro Xarunta Ganacsiga!
Haiti, kubada cagta (kubada cagta) waa mid caan ah. Kwasans FC waxay siisaa qalab iyo taageero kale barnaamijyada kubada cagta dhalinyarada ee Léogâne, Haiti.
Guji si aad waxbadan uga barato Kwasans FC!
Kwasans Foundation waa mid aan faa'iido doon ahayn, 501 (c) (3) hay'ad samafal ah. Iyada oo dusha sare ee eber, 100% tabarucaadkaaga waxaa la siiyaa dadka Haiti.
Wax mudan in loo dagaalamo !!!!
Kwasans iyo Xarunta Caalamiga ah ee Jaamacadda Notre Dame ee Horumarinta Ilmaha oo dhan (GC-DWC) waxay bilaabeen hindise cusub oo loogu talagalay in lagu kobciyo mashaariic horumarineed oo waara oo deegaanku hoggaaminayo.
Baro wax badan oo ku saabsan hindisaha cusub ee wadajirka ah
Ku soo dhowow xubin cusub oo ka tirsan kooxda Jamison Greene. Guji si aad wax badan u barato!
Waxbadan ka baro Jamie iyo Earl Carter Fellowship
Ayaa Ka Faa'iidaysanaya?
Waxaan jecel nahay inaan aragno koritaan waara oo waji kasta oo habnololeedka Haitian ah. Hadafkeenu waa inaan taageerno hay'adaha Haiti ee faa'iidooyinka u keeni doona dadka Haiti.
Markaan taageerno ganacsiga, waxbarashada, iyo tikniyoolajiyadda, dadka Haiti waxay arki doonaan fursado badan oo lagu hagaajinayo noloshooda iyo maalgashi mustaqbalkooda ah.
Ganacsatadu waxay lahaan doonaan ilo dhaqaale oo loogu talagalay kobcinta ganacsiyada iyo ka qayb qaadashada kobcinta dhaqaalaha.
Diirad saarida waxbarashada waxay gacan ka geysan doontaa in dadka lagu qalabeeyo aaladaha loo baahan yahay si loo abuuro fursado wanaagsan.
Xusuusta Clarence "Earl" Carter
Earl wuxuu shaqsi ahaan iyo dareen ahaanba u heellanaa inuu caawiyo dadka reer Haiti iyada oo laga ciribtirayo cudurka 'Lymphatic Filariasis' iyo kahortagga Ciladaha Yaraanta Iodine. Dadaalkiisii ​​naf-hurnimada iyo dahsoonaa, u adeegistii shirkii 'The Holy Cross' ee magaca Masiixa, wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha malaayiin iyo waddada qaran.
Maqal isaga oo la wadaagaya Bon Sel Dayiti, oo ah warshad milixeed oo aan ku taageerno Haiti fiidiyowgaan (laga bilaabo 01: 41).
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida aad uga qayb qaadan karto xusuusta Earl, fadlan riix halkan
Wax mudan in loo dagaalamo !!!! Kwasans iyo Xarunta Caalamiga ah ee Jaamacadda Notre Dame ee Horumarinta Ilmaha oo dhan (GC-DWC) ayaa bilaabay hindise cusub oo looga golleeyahay in lagu kobciyo mashaariic horumarineed oo deegaanku hoggaaminayo.
Wax mudan in loo dagaalamo !!!! Xarunta Caalamiga ah ee Jaamacadda Notre Dame ee Horumarinta Ilmaha Dhan (GC-DWC) ayaa billowday hindisaheedii ugu cusbaa oo looga golleeyahay in lagu kobciyo mashaariic horumarineed oo deegaanku hoggaaminayo. Hindisaha GC-DWC ee Hindisaha Ganacsiga Bulshada (SEI) wuxuu isku daraa xoogagga suuqa,
Jamison Greene oo lagu abaalmariyay Daahfurka Earl Carter Fellowship
Jamison Greene waxaa la guddoonsiiyey wehelnimadii Earl Carter Fellowship ee Jaamacadda Caalamiga ah ee Jaamacadda Notre Dame ee Horumarinta Dhammaan Carruurta (GC-DWC) Kooxda Hindisaha Ganacsiga Bulshada (SEI). Wehelnimada Earl Carter waa magaca cusub ee GC-DWC
Fadlan ka caawi Kwasans inay u keento dib u soo nooleyn dhaqaale, bulsho, iyo caafimaad dadka Haiti. Tallaabada ugu horreysa waa ogaanshaha! Isku qor si aad u hesho cusbooneysi bille ah oo ku saabsan shaqada ka socota dhulka si loo xoojiyo dadka Haiti.
Dhammaan Xuquuqda La Leyahay 2020 | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Kwasans.org | Shuruudaha & Shuruudaha